N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ - Most Recent
Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပါမောက္ခချ...
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူအပ်သော မာနတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
Tags: ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူအပ်သော မာနတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း Dr. Nandamalabhivamsa International Theravada Buddhist Missionary University, Yagon Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပါမောက္ခချ...
Tags: ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူအပ်သော အဘိဓမ္မာ နှင့် ဝိပဿနာ တရားတော် Dr. Nandamalabhivamsa International Theravada Buddhist Missionary University, Yagon Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပါမောက္ခချ...
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသဟာကြားတော် မူအပ်သော ကမ္ဘာကြီး၏နောက်ဆုံးနေ့များ youtube link:...
Tags: ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူအပ်သော ကမ္ဘာကြီး၏နောက်ဆုံးနေ့များ Dr. Nandamalabhivamsa N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပုဂ္ဂိုလ်ြ...
ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို ၏နှလုံးအိမ် - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ
Tags: ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို ၏နှလုံးအိမ် - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ professor dr. nandamalavivimsa nandamarlarviwuntha N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] SG Recorded Live...
SG Recorded Live ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒာမာလာဘိဝံသ
Tags: SG Recorded Live N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဒက္ခိဏ၀ိဘဂ...
ဒါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ - ဒက္ခိဏ၀ိဘင်္ဂသုတ်အနှစ်ချုပ် တရားတော်
Tags: ဒါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ - ဒက္ခိဏ၀ိဘင်္ဂသုတ်အနှစ်ချုပ် တရားတော် N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ၁၂နှစ်ကြာ...
ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ - ၁၂နှစ်ကြာအဖြေရှာခဲ့ရသောမေးခွန်းများ တရားတော်
Tags: ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ ၁၂နှစ်ကြာအဖြေရှာခဲ့ရသောမေးခွန်းများ Dr nandamalabhivansa nandamalabhiwantha nandamalaviwintha T - Thi La Ganda - သီလကဏ္ဍ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဥပုသ်စောင...
ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ - ဥပုသ်စောင့်ခြင်း အဓိပ္ပါယ် တရားတော်
Tags: ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ , ဥပုသ်စောင့်ခြင်း အဓိပ္ပါယ် , သီလ , Dr Nandamalabihivansa , Nandamarbhiwantha , Thi La , Oopote , Oo pote , ဥပုသ် N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပါမောက္ခချ...
ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ မှ ဦးကိတ္တိသာရ(ဦးကျော်ဟိန်း) အားပြောကြားအပ်သော သြဝါဒ တရားတော် OO Kyaw Hein Kyaw Hain
Tags: ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ - ဦးကိတ္တိသာရ(ဦးကျော်ဟိန်း) Kyaw Hein Hain N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သူတို့ကြေ...
အရှင်ဆေကိန္ဒ (ဓမ္မဒူတ) - (၂၀၀၉)၀ါတွင်းဒုတိယအကြိမ်တရားစခန်း၌ဟောကြားတော်မူသော... သူတို့ကြောင့် တရားတော် (၂)- USKD - TDK - 2
Tags: အရှင်ဆေကိန္ဒ (ဓမ္မဒူတ) Pages: 123 of 3